MADAWEYNAHA MADOW, AMA HARAGGA: GURYAHA DAWOOYINKA IYO KA HORTAGA - SOOSAARKA DALAGGA
Cannaanka madow: faa'iidooyinka iyo waxyeelada, cuntada sida loo isticmaalo
Waa maxay muraayad madow ay u egyihiin, waxaa caan loo yaqaan "waayeelka," qof kastaa wuu ogyahay. Laakiin dad yar ayaa ogtahay sifooyinka bogsashada ee geedkan. Si kastaba ha ahaatee, waxyeellada antiseptic, sedion, anti-bararka, saameynta lidka fungal iyo antipyretic ayaa lagu dhexdhexaadiyaa maaha oo kaliya kuwa dhakhaatiirta caadiga ah, laakiin dawooyinka rasmiga ah iyo farmashiistayaasha.
Waa maxay khaaska ah ee poplar, markaad codsanayso qalabka, iyo waxyaabaha muhiimka ah ee ay leedahay - waxaan ka sheekeyn doonaa wax kasta oo ka dambeeya maqaalkan.
Herbalists waxay yiraahdaan faa'iido badan kelyo xanuun, inkasta oo daawada dadku ay jiraan cuntooyin, oo ay ku jirto maaddooyinka cayayaanka iyo caleemaha. Laakiin ka hor inta aan ka hadalno sifooyinka bogsashada ee geedka, ogow waxa ay sabab u yihiin. Xaaladaha shaybaadhka, cilmi-baarayaashu waxay ogaadeen in caleenta cagaarka madow ay ka kooban tahay kayd ballaaran oo alkaloids, fareeshka, fenolcarboxylic acid, terpenes iyo carotenoids. Flavonoids iyo hydrocarbons waxay ku adkaataa koontada. Kelyuhu waxay ka kooban yihiin waxyaabo ay ka mid yihiin saliida muhiimka ah iyo saliidaha, phenol glycosides, macmacaanka iyo walxaha dabaysha, salicin, gallic iyo asalaha malic, vitamin C, populin, chrysin iyo leucoanthocyanins.
Ma taqaanaa? Beeraleydu way qadariyaan alwaax. Ka dib dhan 20 sano oo ka mid ah hal hektar oo kayn ah waxa aad ka heli kartaa alaabo qaali ah oo qiime jaban leh sida geedkii lalabooba geedkii wuxuu siin doonaa qarniyo.
Inkasta oo uu cadhooday dad badan oo xasaasiyad ku leh caanaha madow, dadka botanistu waxa ay ka mid yihiin geedaha ugu faa'iidada leh ee dalalkeena. Meelkani waxa uu sabab u yahay saameyn ballaaran oo ka dhan ah qaybaha geedka ee jirka aadanaha. Isku xirnaansho adag, qaybaha Osokor waxay leeyihiin: bakteeriyada, duriinka, sedative, xanuunka, boogaha, bogsashada-bogsashada iyo ficilka anti-bararka.
Ma taqaanaa? Caleemaha madow ee caleemaha waxaa loo isticmaalaa warshadaha loogu talagalay walxaha maqaarka, iyo sidoo kale dharka muraayadaha midabka huruud ah. Laga soo bilaabo jilif ee geedo-jirrada geedku waxay sameeyaan qalabka kalluumeysiga.
In geeddi-socodka diyaarinta qalabka ceeriin ceeriin, qaybaha qayb ka mid ah warshadda gasho silsilad ah falcelinta physicochemical joogto ah, taas antiseptic wax ku ool ah. Sidaa darteed, decoctions, shaaha, tinctures iyo osokra cadaraha ayaa si ballaaran loo isticmaalaa daaweynta cudurada neefsashada, boronkiitada, qufaca, cunnida suufka. Herbalists waxay aaminsan yihiin in daawooyinka dadweynaha ee boqolkiiba 40 ay dedejiyaan joojinta geedi socodka bararka.
Waxaan kugula talineynaa inaad aqriso sifooyinka bogsashada iyo isticmaalka alaabta ceeriin ee geedaha: Linden, qaxwaha, soodhada, gacaska, buurta buuraha, shimbir shimbir, thuja, laurel, jimicsi.
Maraqyada ayaa gacan ka geysta in laga takhaluso madax-xanuunada, waxay yareeyaan colka cagaarshowga (gaar ahaan xaaladaha daaweynta daroogada ay ka hortagaan), waxay xummad yareeyaan carruurta. Isticmaalka dibedda ee geedka kelyaha ku salaysan ayaa ka caawiya inuu la qabsado dermatitis kala duwan, naaquska cuncunka, waxay caawisaa in lagu xoojiyo nabarrada si fiican u bogsanaya. Waxaa intaa dheer, daaweyntan oo kale waxay wax ku ool u tahay cystitiska, xanuunada mareenka dheef-shiidka, isbaarada iyo colitis. Iyada oo caanaha waa la daaweyn karaa xitaa niyadjab, hurdo la'aan iyo hagaajinta dareenka dareenka leh daal aad u liita. Sidoo kale, tinctures iyo decoctions sida ka caawiyaan arthritis, neuralgia iyo boogaha.
Ma taqaanaa? Farmashiistayaasha qarnigii XIX waxa ay u suurtagashay in la abuuro wax laga soo saaro caleemo iyo burooyinkeeda salmon, taas oo gacan ka gaysatay sidii loo xallin lahaa xad-dhaafka galmada ee xad-dhaafka ah.
Daawada dhaqameed waxay kugula talineysaa daawooyinka madow ee daaweynta burooyinka malignantiga ah, tiibishada, furunculosis, gubasho iyo xitaa alopecia. Waxaa la rumeysan yahay in timirta joogtada ah ee timaha dhirta ee dhirta ay ka caawiso xoojinta timaha timaha iyo bogsashada cagaarshowga.
Haddii aad ka baratay sifooyinka bogsashada ee macaamiisha madow ee hadda, marka xilliga goosashada maqaarku uu dhammaado, ha welwelin. Xanuunka Potion waxaa laga helaa xayeysiin aan xadidnayn farmashiyo kasta.
Iyada oo ku xiran waxa iyo sida aad u daaweyn laheyd, dooro burooyinka caleemaha, tinctures, boomska phyto, dabeecada dareeraha ah.
Badanaa, kelyuhu waxay u yimaadaan iibinta caag ama caag baakado ah baakado kala duwan.
Tincture Black Poplar oo lagu iibiyey dhalooyin quraarad ah 100-250 ml. Qaar ka mid ah makhaayadaha ayaa isku darsamaya burooyinkeeda bjørk iyo diyaarinta dhirta kale.
Waa muhiim! Xaaladaha bararsan, saameynta daaweynta ee daaweynta Osoxoran waxay dhacdaa muddo 4-8 maalmood ah.
Sidoo kale qaybta farmashiyaha waxaa ku jira daroogo "Adenon", oo ku saleysan soo saarista qiiqa. Waxaa loogu talagalay daaweynta iyo ka hortagga adenoma qanjirka 'prostate'. Jihada this, phyto-silsiladaha iyo shumacyada-shumac leh leh soo saarista poplar yihiin wax ku ool ah. Waxaa lagula talinayaa in lagu buufiyo dhiigbaxa iyo qanjirka 'prostatic hyperplasia'.
Kelyaha waxaad ka heli kartaa khaas ah phytobalmoo ku salaysan caanaha. Intaas waxaa dheer, qiimaha daawooyinkan dabiiciga ah, marka la barbardhigo beddelaadaha bedelka ah ee dibadda, ayaa la heli karaa xitaa qaybaha dakhliga ee dadka. 100 g ee kelyaha waa inay bixiyaan qiyaastii 35-50 UAH, iyo 200 ml balsam ama tinctures - gudaha 50-200 UAH.
Baro wax badan oo ku saabsan isticmaalka hantida daawooyinka ee ku xoortay geedaha daawada: raspberries, waayeelka, duurjoogta, maqaarka, barberry, madow, naar, hibiscus, dawacada lacag, gumi.
Diyaarinta iyo kaydinta alaabta ceeriin ee caafimaadka
Nidaamka ururinta alaabta ceeriin ah way ka duwan tahay goosashada dhirta kale ee daawada, sababtoo ah waxay u baahan tahay jarida laanta. Badanaa waxay dhacdaa marka qulqulka weyn ee geedahaas. Caleemaha caleenta ee madow ee madow waxaa lagu gartaa qaab isku dhafan, midabka cagaaran ama midab jaalle ah, midab udub dhexaad ah iyo dhadhan qadhaadh. Waxay muuqdaan Abriil. Bark iyo caleenta ayaa la goostay marka ugu sarreysa xilli sii kordhaya.
Waa muhiim! Si aad uhesho burooyinka ceelasha si fiican u dillaacsan, u sii qaado ururadooda dhawr saacadood ka dib marka la gooyo laamaha.
Qaybta shaqada waxaa loo sameeyey sida soo socota: laamaha yar yar ayaa la jaraa iyada oo la jabsaday jajab ah, ka dib markii ay gooyeen qalab qiimo leh gacanta. Waxaad u baahan tahay inaad ka shaqeyso gacmo-galis, sababtoo ah dusha sare ee kelyaha ayaa dhaawici kara gacmahaaga.
Ka dibna alaabta ceeriin ayaa loo diraa qalajinta. Burooyinka dhoobada marka qallajinta ay u baahan yihiin inay soo saaraan by a 1.5 cm daaha qaro. Haddii kale waxay noqon doonaan madow oo lumiyo bogsiinta.
Guriga, tani waxay ka baxaysaa waddooyinka boodhka ah, xaashida ballaaran ee duubka ama duubka maro meel fiican oo hawo leh. Xulashada habboon ee tani waa qiiqa. Xilliga roobka qoyan sida meel kale, waxaad isticmaali kartaa qalajiyaha korantada. Xaaladdan, saacadda kuleylka ayaa lagu qiyaasaa 35 °. Doorashadan waxay qaadataa waqti aad u yar, laakiin kharash dheeraad ah. Iyadoo qalajinta dabiiciga ah, ha ilaawin inaad dib ugu noqoto qalabka shaqada oo aad u rogto in ka badan 2-3 saacadoodba, haddii kale burooyinkeeda weyn waxay noqonaysaa mid caaryar ah oo baaba'a. Maalmo yar gudahood maaddadu waxay diyaar u noqon doontaa baako. Ku rid bacaha wax lagu duubo iyo laab laab meel qalalan, oo si fiican u hawo leh. Foomkan, burooyinkeeda madow ee madow ma luminayaan guryaha bogsiinta 2 sano.
Waa muhiim! Marka goosashada alaabta ceeriin ah ha qalloocin burooyinkeeda daacad ah leh ubax. Kama dambaysta ma metelaan wax qiimo leh oo waa weyn. Sida caadiga ah, waxay ku yaalaan caleemo yar yar.
Dhakhaatiirta dadwaynaha waxay bixiyaan kala duwanaansho kala duwan ee daaweynta dabiiciga ah qaabka gogoldhigga, boomaatada, tinctures, cadaadiska, soo saarka.
Iyadoo cudurrada neef-qabatin, hargabka, boronkiitada, xayawaanka sumaysan iyo gout Waxaa lagula talinayaa in aad qaadato saddex jeer maalintii nus koob oo galaas ah oo ka soo baxa burooyinkeeda buluug ah. Diyaarinta daawada 1 qaado oo ah walxo cayriin ah iyo nus litir oo biyo ah karkaraya. Waxaad cabbi kartaa dheriga 2 saacadood ka dib marka la isticmaalo. Ka hor intaadan qaadin waa lagama maarmaan inaad filayso.
Xanuunada, daawada dhaqameed waxay ku talineysaa isticmaalka chamomile, nutmeg, cardamom, anemone, gabbaldayaha, verbena, sage, dhirta, basasha, iyo sharoobada.
Riix diiqada si ay u shaqeeyaan nidaamka dareenka, iyo sidoo kale in laga takhaluso hurdo la'aan, waxaad isticmaali kartaa maraq yar. Diyaarinteeda waxay u baahan doontaa 2 qaado oo ah burooyinkeeda caleemaha la jarjaray oo 400 g oo biyo ah karkaraya. Ka dib marka la isku daro qaybaha oo dhan, ku dheji dhererka dabka ilaa 15 daqiiqo, ka dibna u duub si aad u faafiso. Kadib laba saacadood (markaad si buuxda u qaboojiso), cadaadis oo qaadi karto, qaybinta dareeraha ilaa 3 dose. Cab dariiqan waa suurad wacan inta lagu jiro cuntada. Qiyaasta maalin walba ee daroogada waa in aysan ka badnayn 150 g.
Prostatit waxaa lagu daaweeyaa faleebo 2 qaado oo macaan oo qashin ah iyo 200 g oo biyo nadiifa ah. Qaybaha oo dhan waxaa loo keenay karkar, kadibna waxay ku adkaysanayaan ilaa 3 saacadood. Cabbitaanka khatarta ah 2 qaado qaado cuntada kahor maalintii saddex jeer maalintii.
Marka qanjirka 'prostate' lagu isticmaalo dhaqaalaha yucca, cawska, hilibka doofaarka, momordiki, chabra, leuzei, alokazii, shinni beedka.
Iyadoo cystitis, adenoma prostate, urethritis Herbalists talo ku cabin koob quarter quarter of faleebo ah ee 60 g oo ah burooyinkeeda bluff qalalan iyo 200 ml oo biyo ah karkaraya. Waxaa fiican inaad u diyaargaroobo daroogada. Saacad kaddib, marka la qaado, ciriiri oo isticmaal saddex goor qiyaasta loo qoondeeyey nus saac ka hor cuntada. Decoctions iyo tinctures noocee ah wax ku ool ah daryeelka timaha. Dareemka kuleylka ah waa la jarjarey karaa kadib marka la maydho ama la geliyo xididada.
Isticmaalka dibadda, cadaadiska, looska, boomaatada iyo boodhka ayaa loo isticmaalaa. Waxaa laga sameeyaa maaddooyinka la macmalay: Dufan kasta oo xayawaan ah, oo la jajabiyey (boodh) iyo buro. Saameynta maaddooyinka waa 1: 1: 0.5.
Dhibaatooyinka iyo dhibaatooyinka soo raaca
Cannaanka madow maaha mid gardaro ah, laakiin ka hortaga uurka iyo cudurrada daba dheeraadka ah ee xubnaha dheef-shiidka. Haddii aad iska indha tirto talooyinka dhakhaatiirta faytawanaha, jabinta qiyaasahaas, dhibaatooyinka halista ah iyo cillad la'aanta marinka mindhicirka ayaa dhici karta. Haddii aad dareentid tabar darro iyo xajmiga guud ee daaweynta osoracia ka dib, iska jooji daawada dhawr maalmood. Ha ilaawin inaad la tashato dhakhtarkaaga. Ka dib, damac fiicani wuxuu kugu dhaawici karaa naftaada.
Dad badan waxay xasuustaan ​​kharaqyada madadaalo ah inta lagu jiro ubax, oo ka cabanaya calaamadda caanaha. Laakiin, sida laga soo xigtay khubarada, cadhadaas ayaa ah mid gebi ahaanba aan sal lahayn, sababtoo ah xaqiiqda ah dhirta geedkan naftooda ma aha xasaasiyad. Ciladahooda keliya ayaa ah in ay isku ururaan qaybaha dhirta ubaxyada kale, iyaga oo meel walba ku faafaya. Si kastaba ha noqotee, marka laga soo baxo, dhibaatadan waxaa magdhow ah faa'iidooyinka muhiimka ah ee bani-aadamka.
Sirqarinta daryeelka guriga ee geraniums fragrant: Xeerarka aasaasiga ah iyo dhibaatooyinka suurtagalka ah
Waxaan koraan dalagyada dalka
Qeexida iyo sawirada dhirta caanka ah, suulaliyeyaasha xaaladaha guriga
Tuberous Begonia - Dhamaan murugada daryeelka guriga
Shuruudaha ukunta digaaga, calaamadeynta ukunta cusub
Gentian (Gentia na) - dhirta dhirta badan, dhirbaaxo midabka ubaxyada waaweyn. Qaar ka mid ah gentian kala duwan yaabi kartaa bannaanka u khibrad leh. Gentian waa koox ka mid ah dhirta sanadlaha ah iyo dhirta dilka ah ee ka tirsan qoyska gentian. Qiyaastii 400 nooc oo warshad ah ayaa loo yaqaan caalamka oo dhan. Read More
Euphorbia bordered (Euphorbia marginata) - sida loo abuuro abuurka beertaada?
Delicious iyo caafimaad - guryaha daawooyinka ee shaaha leh fennel, xeerarka diyaarinta iyo soo dhaweynta